'भारतकै पाउमा नाक रगड्दै रह्यौँ तर स्वाभिमान कहिल्यै जागेन' | Citizen Post News
'भारतकै पाउमा नाक रगड्दै रह्यौँ तर स्वाभिमान कहिल्यै जागेन'
२०७६ असार २१ गते ०८:३६
काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष एवम् ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले नेपालीहरु वीर केबल बेलायत र भारतका लागि मात्र भएको तर आफ्नै सीमाना भारतले मिच्दा जहिल्यै निरिह नेपाली हुनुपरेको बताएका छन् । उनले भने,'मात्र बेलायत र भारतका लागि वीर रहने हामी नेपालीले आखिर आफ्नो मुलकको रक्षाका लागि चाहिँ के गयौं त ?' थकित स्वरमा राष्ट्रवाद नजागेकोप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै भने, 'इजरायलले जलमार्ग रोक्दा जस्तालाई तस्तै ब्यवहार गर्यो । भारतले नेपाललाई पटकपटक नाकाबन्दी लगायो । तर भारतकै पाउमा नाक रगडदै रह्रयौं । तर हाम्रो स्वाभिमान कहिल्यै जागेन ।'
'नेपाली संसारभर वीर भनेर चिनिएता पनि वीर नेपाली सेनाकै अघिल्तिर हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतले अर्धसैनिक बल राखेर कब्जा जमाएको छ । पहिले शारदा नहरमा पुलको बिचमा नेपाल र भारतका झन्डा फहराउँथे । अहिले शारदा नहरको पूर्वपट्टि झन्डै ३ किलोमिटरभित्रसम्म नेपालीभूमि भारतले कब्जामा लिइसक्यो । कहाँ छ नेपालीको वीरता ? कहाँ छन् आफ्नो मुलुकका लागि मर्न र मार्न नडराउने नेपाली ?', उनले भने ।
उनले नेपाल भन्दा सानो एउटा मुलुक इजरायलको साहसिक कथा जोड्दै भने, 'सन् १९५० देखि जब इजिप्टले तिरान जलमार्ग रोकेर इजरायललाई अप्ठ्यारोमा पार्यो । तब इजरायलले सन् १९६७ को जून ५ मा आफ्ना तीन छिमेकी मुलुकहरू इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनमाथि एकसाथ आक्रमण गर्यो । इजरायलको हमलापछि इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनको पक्षमा इराक र लेबनानले पनि युद्धमा सहभागी भए । पाँच राष्ट्र एकातिर, अर्कातिर इजरायल एक्लै हुँदा पनि इजरायल नै ती सबै देशमाथि हाबी भयो । ६ दिनसम्म लगातार भएको युद्धमा इजरायलले छिमेकी देशका भू-भाग प्यालेस्टाइनको गाजापट्टी पश्चिमी किनार, इजिप्टको साइनाई प्रायद्वीप र सिरियाको गोलन हाइट्समा कब्जा जमायो । उक्त युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको अग्रसरतामा टुङ्गिँदा इजरायलको नक्सा दोब्बर ठूलो भैसकेको थियोे ।'
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विषादी चेकजाँच हाललाई पयाप्त तयारी नभएको भन्दै ६ महिनाका लागि स्थगन गरेको छ । विषादी परिक्षणपछि मात्र भारतीय तरकारी, फलफुल नेपाल प्रवेश गराउने सरकारको निर्णले सारा नेपाली खुसी भएका थिए । तर सरकारको निर्णय ७२ घण्टा पनि टिक्न नसकेपछि फेरि ब्यापाक आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त तयारी नपुगेका कारण फिर्ता लिएको भनिएता पनि भारतीय दबाबका कारण उक्त निर्णय फिर्ता लिएको सरकारमाथि आरोप लागेको छ ।